‘बाई बाई बाबा’ भन्दै खुसी हुदै मामाघर गएकी छोरीको मामल नपुग्दै मृत्यु, हार्दिक श्रदाञ्जली ! – Namaste Dainik
August 24, 2020 NamastedainikLeaveaComment on ‘बाई बाई बाबा’ भन्दै खुसी हुदै मामाघर गएकी छोरीको मामल नपुग्दै मृत्यु, हार्दिक श्रदाञ्जली !
‘आफ्ना बाबुलाई बाबा बाई भन्दै घरबाट निस्किएकी बालिकाको मामल नपुग्दै ज्यान गएको छ। मामल अगाडिको गेटमा दर्दनाक दुर्घटनाबाट बालिकाको ज्यान गएको हो। महिलाले आफ्नी छोरीलाई स्कुटीमा राखेर मामल आएकी थिइन्। तर मामल नपुग्दै उनको स्कुटी दुर्घटना भयो। ट्याक्टरले बालिकाको टाउको किच्दा उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। महिलाको हातमा गहिरो चोट लागेको छ।
यो घटना भारतको गुजरातस्थित वलसाड क्षेत्रको हो। त्यहाँको डेमंड कम्पनीमा नाइट ड्युटी गर्ने अजमेरी आफ्नी पत्नी र छोरीसँग वलसाडमा बस्दै आएका थिए।शुक्रबार छोरीलाई स्कुटीमा लिएर मामल गएकी उनकी पत्नी पनि घाइते भइन्। उक्त दुर्घटनाले उनको सुखी परिवारको खुसी एकै छिनमा लुटिएको हो।
गरिबीको फाइदा उठाउँदै होटलमा काम लगाइदिने बहानामा १४ वर्षकी बालिकालाई घरवाटै लिएर गएका होटलसंचालकले बाटोमै गरे करणी, पैसा लिएर बयान बदल्न दबाब।